I-FactGem: Dibanisa oovimba beenkcukacha kwimizuzu ... akukho khowudi ifunekayo! | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 8, 2017 Douglas Karr
Idatha ikwisilos. Ishishini kunye ne-IT zombini zifuna umbono omanyeneyo wedatha ukunceda ukubonelela ngezisombululo kwimiceli mngeni yeshishini yanamhlanje. Iingxelo ezibonelela ngemibono emanyeneyo kwidatha edityanisiweyo ziyafuneka ukuze abantu bajonge kulwazi olubalulekileyo kwimibutho yabo kwaye babangele ukuzithemba kumandla abo okuphumeza kunye nokuhambisa ulwazi oluchanekileyo olubalulekileyo kwimpumelelo yenkampani.
Idatha, nangona kunjalo, isasazeka kwiinkqubo ezininzi zobudlelwane, iifayile eziphambili, iinkqubo zeefayile, amaxwebhu eofisi, izinamathiselo ze-imeyile kunye nokunye. Ngenxa yokuba idatha ingadityaniswanga kwaye amashishini esafuna ulwazi olumanyeneyo, amashishini enza ukudityaniswa kwesitulo esijikelezayo kunye nokwenza "ukujonga nokuthelekisa" iingxelo. Babuza isilo esinye kwaye bakope iziphumo ukuze bagqwese, babuze esinye isilo kwaye uncamathisele idatha ngaphezulu. Bayayiphinda le nkqubo de babe banento emele ingxelo abafuna ukuyenza. Olu hlobo lokunika ingxelo lucotha, luyincwadi yesandla, aluthembekanga, kwaye lunempazamo!
Uninzi lwemibutho iyavuma ukuba izixhobo kunye neetekhnoloji ezenze ingxaki yesilo sedatha ayinakusetyenziswa kwisisombululo. Ngenxa yoko, kule minyaka imbalwa idlulileyo, sikubonile ukwanda koovimba beenkcukacha zeNoSQL kunye neetekhnoloji zisasazwa ukunceda ukudibanisa idatha ngokukhawuleza nangakumbi ngobuchule. Ngelixa ezi ndawo zolwazi zinamandla kunye namaqonga zinokunciphisa ixesha lokudibanisa idatha xa kuthelekiswa neendlela zesiko, zonke zizinto zokuphucula kwaye zizisa nolunye ucelomngeni ekufuneka loloyisiwe xa kufikwa ekufumaneni izakhono eziyimfuneko ukuphuhlisa kunye sebenza ngezi teknoloji. Mininzi imiqobo ekhoyo kule nkqubo kubandakanya ukuhlaziywa kotshintsho kulawulo kunye neenkqubo zeshishini ukuze uphumelele ekuhambiseni iziphumo.
Inyaniso ibonelela ngendlela yokudibanisa idatha ngaphandle kokubhala nayiphi na ikhowudi. Bakholelwa ekubeni kufanele ukuba kubekho indlela elula yokudibanisa idatha, kwaye ikhona. Bayidala!
Iqela lobunjineli kwiFactGem lithathe uxanduva lokusingatha ubunzima bokudityaniswa ukuze abasebenzisi beshishini kungafuneki. Ngoku, ingxoxo yokudityaniswa kwedatha akufuneki iqale nge-IT. Ngenxa yoko, usetyenziso lokudityaniswa kwedatha yeFactGem inokusetyenziselwa ukudibanisa ngokukhawuleza iisilos zedatha ukuhambisa iingxelo ezimanyanisiweyo kwidatha eyayinqanyulwe ngaphambili.
Eyona nto ifikayo kukuba siyisombulule le ngxaki ingenakwenzeka ngokombono wobuchwephesha, kodwa eyona nto siyibonisayo sisisombululo seshishini. Umphathi omkhulu we-Megan Kvamme
Xa kudityaniswa idatha, baqala ngokucinga ukuba idatha yakho sele imodelwe. Abantu abakrelekrele kumbutho wakho, kwaye abathengisi othenge kubo izicelo kunye nezisombululo, benze le modeli. Izinto kunye nobudlelwane obukhathaleleyo kwaye ufuna ukudibanisa bahlala kwii-silos zedatha yakho. Zijongeka ngathi abathengi, iiodolo, intengiselwano, iimveliso, imigca yemveliso, ababoneleli, amaziko, kunye nokunye. Bafuna ukuvula idatha kwezi zinto kwaye bazidibanise kwingxelo ehambisa ulwazi olunomdla lweshishini. NgeFactGem, lo ngumsebenzi olula.
Ukuba ungazoba izinto kunye nobudlelwane bombutho wakho kwibhodi emhlophe, ungasebenzisa iFactGem ukudibanisa idatha yakho. Yinto elula nje leyo.
Ukudibanisa idatha kunye neFactGem, qala nge-WhiteboardR. Kwesi sicelo, tsala kwaye ulahle izinto kunye nobudlelwane ukwenza imodeli esengqiqweni yedatha edityanisiweyo "ngebhodi emhlophe" kuyo kwisikhangeli. Kwi-WhiteboardR, chaza ukuba zeziphi iimpawu ofuna ukuzidibanisa nequmrhu ngalinye, kwaye kuya kufuneka ubonise kuphela into oyifunayo, njengoko uyidinga. Awunyanzelekanga ukuba wazi zonke iimpawu ezinxulumene nawo onke amaqumrhu ngaphambi kokuba uqale. Akunyanzelekanga ukuba wazi zonke iisilos kunye nemithombo ekugqibeleni ofuna ukuyidibanisa. Owona mkhwa ulungileyo kukuqala ngokwenza imodeli yeesilos ezimbalwa owaziyo ukuba zinokubonelela ngengxelo emanyeneyo- kunye nexabiso kwangoko kwishishini lakho. Imephu yezinto zakho, iimpawu zabo, kunye nobudlelwane babo komnye nomnye. Unokude wenze nemithetho yeshishini yokuchaza ukuba yintoni eyenza ukuba iqumrhu lahluke kwaye yintoni ubukhazikhazi bobudlelwane bayo obufanele ukuba bube malunga namanye amaziko ahambelana noko. Nje ukuba le modeli yenziwe, uhambisa imodeli ukuze isetyenziswe kwiMappR.
Ngelixa i-WhiteboardR ikuvumela ukuba usebenzise usetyenziso ukuchaza imodeli edityanisiweyo, emanyeneyo, ebanzi yeshishini, iMappR ikuvumela ukuba ubeke imephu ezahlukeneyo zedatha kwimodeli emanyeneyo yeWhiteboardR. KwiMappR, ungasampula umthombo wedatha kwaye uqalise ukwenza imephu. Masithi kumthombo ovela kwisilo esinye uneempawu ukugcina nakwesinye isililo, uneempawu ilungu_id, kwaye uyazi ukuba bobabini babhekisa kumthengi. NgeMappR, unokwenza imephu zombini ezi mpawu kwiimpawu ezidibeneyo umthengi_i sele uchaze kwimodeli emanyeneyo yeWhiteboardR. Ngokukhawuleza nje ukuba ubeke imephu kwiimpawu ozikhathaleleyo ngomthombo, iMappR inokungenisa iifayile ezivela kweso silo kwaye iya kudityaniswa ngokuzenzekelayo kwimodeli yeWhiteboardR kwaye ibuzwe ngokukhawuleza kwimbono emanyeneyo. Ungaqhubeka nokubeka imephu kwimithombo yolwazi kunye nokungenisa idatha ngale ndlela de udibanise idatha oyifunayo ngombono omanyeneyo.
Nge-WhiteboardR kunye neMappR, ungagcina, uguqule, kwaye uthumele ngaphandle iimodeli ozenzayo. Ezi modeli zinexabiso kuba ziye zaba ngumsesane wokuguqula ukunceda ishishini kunye ne-IT ukunxibelelana nokuqonda kwabo kwedatha yombutho, indlela emayisetyenziswe ngayo, kunye nendlela esetyenziswa ngayo kwiisilos. Ezi modeli zinokusetyenziselwa ukunceda ukwazisa ukuthunyelwa kwedatha entsha kunye nokuqalisa kwakhona amanyathelo okunceda ukuqinisekisa impumelelo yabo.
Nje ukuba idatha ilayishwe, i-BuildR ikuvumela ukuba wenze ngokukhawuleza, ideshibhodi ebuzekayo kuyo yonke idatha yakho emanyeneyo kwisikhangeli. I-ConnectR ikuvumela ukuba uhambise isinxibelelanisi sedatha yewebhu kwiTafileau kunye nezinye izixhobo ze-BI ukuze ukwazi ukusebenzisa izixhobo zokunika ingxelo kwidatha yakho emanyeneyo ngoku.
Kungenxa yokuba i-FactGem iphakamisa ubunzima bokudityaniswa kwedatha, kwaye kuba kuya kufuneka ubeke imodeli kunye nemephu yento oyifunayo, njengoko uyidinga, ukudityaniswa kwedatha kunye nokuhanjiswa kwengqiqo kukhawuleza ngokukhawuleza. Injani le nto ebomini bokwenyani?
Nantsi into yokudityaniswa kwedatha yesiqhelo yeFactGem ijongeka ngathi:
Ngehlobo ephelileyo, umthengisi weFortune 500 uye kwiFactgem, ecela uncedo kuba besebenzisa iCRM enkulu kunye nokutsala idatha kwezinye iindawo ukuzama ukufumana ukuqonda. Isazinzulu esiyiNtloko seDatha kufuneka sidibanise ngokulula iivenkile, i-e-commerce kunye nolwazi lokugcina idatha yabathengi ukuqonda "Ngubani umthengi?"
I-FactGem ithembise ukuhanjiswa ngeeyure ezingama-24. Bakhe imodeli edityanisiweyo kuzo zonke iivenkile kunye nabathengi, baveza ulwazi olutsha, kwaye bayenza ngeyure ezi-6, hayi ezingama-24! Kwaye . . . Umthengi # 1 kwivenkile wazalwa. Baye basuka ekujongeni isixeko esinye kwiiyure ezi-6 bejonga kwilizwe liphela, ngaphezulu kwamawaka eevenkile, amashumi ezigidi zabathengi kunye neetabytes zedatha- kwaye bekwenza konke oku kwimisebenzi yosuku. Abanye bakwivenkile, iinkonzo zezezimali, kunye nasekwenzeni imveliso ngoku baqala ukubona nokuqonda izibonelelo zeFactGem kwimibutho yabo.
Itekhnoloji iqhubele phambili ukuya kwinqanaba apho kungafuneki ukuba ibe kuphela kwengqwalaselo yeenjineli. Ukuhlanganiswa kwedatha yanamhlanje akunzima njengoko isebe lakho le-IT lingathanda ukuba ukholelwe. I-CTO Clark ityebile
Imodyuli ye-FactGem's WhiteboardR idibanisa imithombo yedatha eyahlukileyo ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na ikhowudi.
Tyelela iFactGem ukuze ufunde ngakumbi
tags: UClark ucebileukudityaniswa kwedathainyaniukudityaniswaimephuUMegan KvammeIbhodi emhlophe
Lixesha leholide kwakhona, Nazi iindlela ezili-10 zokuKhulisa iZiphumo zakho